Real Madrid ayaa ku dhex jirta mashaqo dhaawacyo ah, waxaana Jimcihii maanta la xaqiijiyey in kulanka Sabtida ee Cadiz uu seegi doono laacibka khadka dhexe ee Martin Odegaard.
Da’yarkan reer Norway oo qayb weyn kasoo qaatay kulamadii Real Madrid ee xili ciyaareedkan, isla markaana doorasho fiican oo hal abuur leh u ahaa Zinedine Zidane ayaa uu dhaawac kasoo gaadhay kulan uu waddankiisa u ciyaaray Arbacadii oo ay guul weyn ka gaadheen Northern Ireland.
Odegaard ayaa laba gool caawiyey ciyaartii qarankiisa ee Arbacadii kuwaas oo uu dhaliyey Erling Haaland oo warbaahinta amaan uga jeediyey qaabka cajiibka ah ee uu kubadda u farsameeyo Martin.
Real Madrid ayaa Jimcihii maanta xaqiijisay in Martin Odegaard uu dhaawac kasoo gaadhay muruqa lugta midigta oo uu garoomada ka maqnaan doono muddo aan la cayimin.
Odegaard ayaa Real Madrid kusoo laabtay xagaagan, kaddib xili ciyaareed uu si fiican isku muujiyey oo uu amaah ugu ciyaaray Real Sociedad, waxaana tan iyo bishii August markii uu soo gaadhay Los Blancos uu ciyaaray saddex ka mid ah afartii ciyaarood ee horyaalka LaLiga ee xili ciyaareedkan ay kooxdiisu dheeshay.
Laba ka mid ah kulamadan ayuu kusoo bilowday iyadoo ay joogaan ciyaartoyda waaweyn sida Luka Modric oo isaga laga soo hormariyey kulanka kalena waxa uu kusoo galay beddel.
Dhaawacan ayaa Real Madrid walaac weyn ku ah maadaama oo uu hore uga maqnaa Eden Hazard, inkasta oo ay usoo kaceen Toni Kroos iyo Marco Asensio, waxaana usbuucan kusoo fool leh kulanka Cadiz ee LaLiga, Ciyaarta Champions League ee Shakhtar Donetsk iyo Sabtida dambe oo ay Barcelona ku kulmi doonaan ciyaartooda koowaad ee El Clasico ee xili ciyaareedkan.